मलाई थाहा छ मैले प्रयोग गरें? शीर्षकमा, तर मेरो मतलब के हो? व्यक्तिगत रूपमा, म इमोजिसको प्रयोगमा बेचिएको छैन (भावनात्मकको ग्राफिकल प्रतिनिधित्व)। ब्यापार संचारको क्षेत्र मा, मँ कहीं ईमोजिस फेला पार्छु सर्टकट टेक्स्ट र cussing बीचमा। व्यक्तिगत रूपमा, म तिनीहरूलाई वास्तवमै व्यंग्यात्मक फेसबुक टिप्पणीको अन्तमा प्रयोग गर्न मनपराउँदछु, व्यक्तिलाई थाहा दिनको लागि म उनीहरूलाई अनुहारमा मुक्का नदेखाऊ। ?
सिग्नल बाट यो इन्फोग्राफिक प्रयोग को धेरै उदाहरणहरु मा हिंड्दछ। बड लाइट, स्याडेडे नाइट लाइभ, बर्गर कि,, डोमिनोज्स, म्याकडोनाल्ड र टाको बेलले इमोजिसलाई उनीहरूको मार्केटिंग संचारमा समाहित गरेका छन्। र यो काम गर्दैछ! इमोजी-सक्षम विज्ञापनहरू क्लिक-थ्रु रेटहरू उत्पन्न गर्दछ जुन २००० इंडस्ट्री मानक भन्दा उच्च छ